Curtain voaravaka pompom | Asa tanana
Curtain voaravaka pompom
Manao ahoana daholo! Amin'ny asa tanana ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba handravahana ambainy voaravaka pompom. Fomba tsotra handokoana ny lambam-bolantsika mba handraisana tsara ny toetr'andro. Havaozinay koa amin'ny fomba tsotra ny fanaingoana ny efitrano rehetra.
Te hahafantatra ny fomba anaovanao azy ve ianao?
1 Fitaovana ilaintsika handravahana ny lambam-bolantsika amin'ny pompom
Fitaovana ilaintsika handravahana ny lambam-bolantsika amin'ny pompom
Volonondry tsy matevina loatra ka tsy lehibe loatra ny pompom-borona. Misafidiana loko maro araka izay itiavanao azy.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia manaova pompom kely, noho izany dia azontsika atao ny manamboatra azy ireo amin'ny alàlan'ny fork. Hodinihinay tsara fa mifangaro tsara ny pom poms mba ho mena volo izy ireo. Mba hanaovana izany dia hanaraka ireto dingana ireto isika: Manamboatra pompon kely izahay amin'ny alàlan'ny fork
Rehefa manana pom poms be dia be isika, Izahay dia hamolavola ny fomba itiavantsika ny famolavolana amin'ny ambainy. Ohatra, manjaitra ny pom poms amin'ny tsipika marindrano mahitsy. Andalana pomponin'ny loko tsirairay na fanovana loko isan-karazany amin'ny fomba hafa, na inona izany na inona dia homarihintsika amin'ny pensilihazo ny volavolainay.
Rehefa mazava momba ny famolavolana isika dia hanana ihany mandehana manjaitra ny pompoms amin'ny ambain-tsika. Ho fanampin'izay dia afaka manjaitra faribolana kely mitovy loko izay nampiasaintsika tamin'ny fanaovana ny pompon kely isika.
Ary vonona! Nanomana ny lambam-baravaranay izahay amin'ny fahatongavan'ny toetr'andro tsara. Fomba tena tsotra fanavaozana ny ambaintsika io. Ho fanampin'izay, raha mankaleo pompom isika dia afaka mamaha azy ireo foana ary milamina indray ny ambainy.
Raha te-hamita ity haingon-trano ity isika dia afaka manao clamp ambainy toy izao manaraka izao:
Clamp ambainy haingana sy mora
Clamp clamp amin'ny tady sy paompy
Izahay koa mamela anao hanana hevitra bebe kokoa hanamboarana asa-tanana miaraka amin'ny pompom: Asa tanana 7 vita amin'ny pompom
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Curtain voaravaka pompom
Fonosina harona zaza amin'ny fomba tany am-boalohany
Hevitra 5 tokony homena amin'ny Fetin'ny Reny